Tiger Balm® (ကျားပရုတ်ဆီ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Tiger Balm® (ကျားပရုတ်ဆီ)
Tiger Balm (ကျားပရုတ်ဆီ) ကဘာလဲ။
ရေးသားသူ Dr.Thant Zin ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Thurein Hlaing Win
Generic Name: Tiger Balm® (ကျားပရုတ်ဆီ) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Tiger balm ကို မည်သည့် အကြောင်းအရာများအတွက် အသုံးပြုကြပါသလဲ။
Tiger balm ကို နာကျင်ကိုက်ခဲမှု သက်သာရန် အများဆုံး အသုံးပြုသည်။ ၄င်းလိမ်းဆေးသည် ဆေးဖက်ဝင်အပင်များမှ ပြုလုပ်ထားသည့် အကိုက်အခဲပျောက် လိမ်းဆေး ဖြစ်သည်။ အဆစ်အမြစ်ရောင်ခြင်း၊ အဆစ်ရောင်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေသော ကြွက်သားနာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းများနှင့် သာမန်ထိခိုက်ဒဏ်ရာများ၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အကြောတက်ခြင်း စသည်တို့တွင် သုံးစွဲနိုင်ရန် တိုးတက်ထုတ်လုပ်ထားသည်။
Tiger balm ကို ဘယ်လို သုံးစွဲသင့်ပါသလဲ။
အညွှန်းတွင် ပါသည့်အတိုင်း၊ (သို့) ဆရာဝန် ညွှန်ကြားထားသည့် တိကျစွာ သုံးစွဲပါ။ လိုသည်ထက်ပို၍လျှော့၍ (သို့) ညွှန်ထားသည့် အချိန်ထက်ပို၍ မသုံးရပါ။
ဆေးမလိမ်းမီနှင့် ဆေးလိမ်းအပြီး လက်များကို ဆေးကြောပါ။
ပထမဆုံးအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါက အရေပြားပေါ် အနည်းငယ်လိမ်းပြီး ဆေးတည့်ခြင်းရှိမရှိ စမ်းသပ်ပါ။
Camphor နှင့် menthol တို့သည် လိမ်းလိုက်လျှင် ပူခြင်း၊ အေးခြင်းစသည့် သဘာဝရှိပြီး တဖြည်းဖြည်းချင်း လျော့သွားလေ့ရှိသည်။ အကယ်၍ ပူသည့်ခံစားချက်မှာ လျော့မသွားဘဲ ခံစားရခက်လာလျှင် အရေပြားကို ဆပ်ပြာ၊ ရေတို့ဖြင့် ဆေးကြောပါ။
နေလောင်ခြင်း၊ လေလောင်ခြင်း၊ အသားပတ်ခြင်း၊ အရေပြားခြောက်သွေ့အက်ကွဲခြင်းများတွင် မသုံးရပါ။ လိမ်းထားသည့် အရေပြားကို ပတ်တီးစည်းထားခြင်း၊ အပူကပ်ခြင်း၊ ချွေးထုတ်ခြင်းများကို မပြုရပါ။
ရေမချိုးမီ ၁နာရီ၊ ရေချိုးပြီး နာရီဝက်အတွင်း ဆေးမလိမ်းပါနှင့်။
၇ရက်နေ၍ မသက်သာလျှင်၊ သို့မဟုတ် ခေါင်းကိုက် ဖျားနာခြင်း၊ အရေပြားအကွက်များထွက်ခြင်း ဖြစ်လျှင် ဆရာဝန်ပြပါ။ နာကျင်ကိုက်ခဲမှု မသက်သာလျှင်၊ သက်သာသွားပြီးနောက် ရက်အနည်းငယ်အတွင်း ပြန်ဖြစ်လျှင်လည်း ဆရာဝန်ပြပါ။
အခန်းအပူချိန်တွင် သိမ်းဆည်းပါ။ မသုံးစွဲသည့်အခါ ဆေးဘူးကို လုံခြုံစွာ ပိတ်ထားပါ။
Tiger balm ကို ဘယ်လိုသိုလှောင် သိမ်းဆည်း ထားသင့်ပါသလဲ။
Tiger balm ကို အခန်းအပူချိန်တွင် တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည် မထိတွေ့ရန်၊ မစိုစွတ်မှုမရှိစေရန် သိမ်းဆည်းခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ဆေးအာနိသင် ပျက်ပြယ်ခြင်း၊ ဆေးအနေအထား ပျက်ယွင်းခြင်း မဖြစ်စေရန် ရေချိုးခန်းတွင်း သိမ်းဆည်းခြင်း၊ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။ Tiger balm ဆေးအမျိုးအစား၊ ဆေးထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းသည့် ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါသည်။ ဆေးဘူးအခွံတွင် ပါသည့် သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှု ညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းခြင်းမျိုးကို အမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးများအားလုံးကို ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့် ဝေးရာတွင်ထားပါ။
Tiger balm ကို အိမ်သာတွင်း ပစ်ချခြင်း၊ ရေထွက်ပေါက်များမှ ဆေးချခြင်းကို မလုပ်သင့်ပါ။ ဆေးဝါးများကို မလိုအပ်တော့လျှင်၊ သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသွားလျှင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီးသည်။ ဆေးဝါးများအား စနစ်တကျ မည်သို့ စွန့်ပစ်ရမည် ဆိုသည်ကို ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Tiger balm ကိုမသုံးစွဲခင်မှာ ဘယ်အချက်အလက်တွေကို သိထားသင့်သလဲ။
အရေပြားသည် ထိခိုက်ပျက်စီးလွယ်ပါက အသုံးမပြုမီ ဆရာဝန်၊ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူများနှင့် တိုင်ပင်ခြင်းသည် သင့်ကို ဘေးကင်းစေပါသည်။
ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက်မပါဘဲ ကလေးငယ်များအတွက် မသုံးစွဲပါနှင့်။
ကိုယ်ဝန်ရှိနေချိန်၊ ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် ဆရာဝန်၏ ညွှန်ကြားချက်မပါဘဲ မသုံးစွဲပါနှင့်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ကလေးနို့တိုက်နေချိန် သုံးစွဲလျှင် ဘေးကင်းပါသလား။
Tiger balm ကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သော လေ့လာ စမ်းသပ်ချက်များ မရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီ ဖြစ်နိုင်ခြေ ကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကို ချိန်ဆနိုင်ရန် သင့်၏ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။
Tiger balm က ဘယ်လို ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိနိုင်လဲ။
မျက်နှာ၊ နှုတ်ခမ်း၊ လျှာ၊ လည်ချောင်း ရောင်ခြင်း
ယခုဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ခံစားရမှုတွင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါသည်။ အထက်ဖော်ပြပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင် မပါဝင်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်းရှိနိုင်ပါသည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါက သင်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ပါ။
ဘယ်ဆေးဝါးတွေက Tiger balm နဲ့ ဓာတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်နိုင်သလဲ။
Tiger balm သည် သင်ယခု သောက်သုံးနေသည့် တခြားသော ဆေးဝါးများနှင့် ဓာတ်ပြုမှုများ ဖြစ်နိုင်ကာ ဆေးဝါးများ အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ခြေ ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်နိုင်သည်။ မလိုလားအပ်သော ဆေးဝါးဓာတ်ပြုမှုများ မဖြစ်လာစေရန် သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေသည့် ဆေးဝါးအားလုံး စာရင်း လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်ရာတွင် ဆရာဝန် ညွှန်ကြားထားသော၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေသော၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများ အားလုံးပါဝင်သည်) ဆရာဝန် သို့် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးများကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက် မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကို ပြောင်းလဲခြင်းများ မပြုလုပ်ပါနှင့်။
အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာတွေက Tiger balm နဲ့ ဓာတ်ပြုနိုင်ပါသလား။
Tiger balm အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနှင့် ဓာတ်ပြုမှုများဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးများ အကျိုးသက်ရောက်မှု ပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ခြေ ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သော ဓာတ်ပြုမှုများ ဖြစ်မလာစေရန် အစားအသောက်၊ အရက်သေစာများနှင့် ဓာတ်ပြုနိုင်ခြေရှိမရှိ မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါတွေဟာ Tiger balm နဲ့ ဓာတ်ပြုမှုရှိသလဲ
Tiger balm သည် သင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနျေနှင့် ပေါင်းစပ်ဓာတ်ပြုမှုများ ဖြစ်နိုင်ကာ ဆေးဝါးများ အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ခြေ ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်လာနိုင်သည်။ သင်၏ လက်ရှိကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ဆရာဝန်၊ သူနာပြုများထံ အမြဲအသိပေးပြောပြရန် အရေးကြီးပါသည်။
ယခုဖော်ပြပါအချက်အလက်များသည် ဆေးပညာရပ်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များနေရာတွင် အစားထိုးရန်မဟုတ်ပါ။ Tiger balm ဆေးမသောက်သုံးမီ ဆရာဝန်နှင့်ဖြစ်စေ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနှင့်ဖြစ်စေ အမြဲ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာ Tiger balm ကို သုံးစွဲရမည့် အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
လုံလောက်သည့် Tiger balm ပမာဏကို နာကျင်သည့်နေရာသို့ တိုက်ရိုက်လိမ်းပေးရန်ဖြစ်သည်။
ကလေးငယ်တွေမှာ Tiger balm ကို သောက်သုံးရမယ့်အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
ကလေးလူနာများတွင် မည်သည့် အချိုးအစားပေးရမည် ဆိုသည်ကို အတည်မပြုရသေးပါ။ သင့်ကလေးငယ်အတွက် သုံးစွဲရန် စိတ်ချရမှုရှိချင်မှရှိနိုင်ပါမည်။ မည်သည့် ဆေးဝါးမဆို အသုံးမပြုရသေးမီ စိတ်ချရမှုအနေအထားကို အပြည့်အ၀နားလည်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ အချက်အလက်များ ထပ်မံရရှိရန်အတွက် သင့်ရဲ့ ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Tiger balm ကို ဘယ်လိုပုံစံမျိုး အချိုးအစားမျိုးတွေနဲ့ ရရှိနိုင်မလဲ။
Tiger balm ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
အရေးပေါ်အခြေအနေတွေ၊ ဆေးပမာဏ လွန်သွားတဲ့အခြေအနေတွေမှာ ဘာလုပ်သင့်သလဲ။
အရေးပေါ်အခြေအနေ သို့မဟုတ် ဆေးပမာဏ လွန်သွားသည့် အခြေအနေများတွင် အရေးပေါ် ဆေးရုံဆေးခန်းများသို့ သွားရောက်ကုသမှု ခံယူပါ။
ဆေးသုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ရင် (မေ့သွားခဲ့ရင်) ဘာလုပ်ရမလဲ။
Tiger balm ဆေးသုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့လျှင် (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရသည့်အချိန်တွင် အမြန်ဆုံး သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ် သုံးစွဲရမည့်အချိန်နှင့် နီးကပ်နေပြီဆိုလျှင် လွတ်သွားသည့်အကြိမ်ကို ကျော်၍ ပုံမှန်အချိန်တွင်သာ သုံးပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသုံးစွဲခြင်း မလုပ်ပါနှင့်။
Tiger balm. https://www.drugs.com/mtm/tiger-balm.html Accessed October 03, 2016
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဇူလိုငျ 25, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဩဂုတျ 16, 2017